BIOS ROM ama loo yaqaan BIOS waa qayb muhiim ah oo computer ah. Mar kasta oo aan u leexano kombiyuutarka, markii hore waxa uu muujinayaa kartida xasuusta, ayaa sidoo kale si lama filaan ah glows iftiinka qufulka NUM ah, oo waxaa sanqadhaya beep ah dhamaadka, ka dib markii taas oo aan soo arko Windows Logo yaqaan. Wixii geek computer ah kani waa dhaqan ka caadi ah oo ka soo bandhigaa computer ka dib waxaa lagu gagadin, si kastaba ha ahaatee la mid ah ma la odhan karaa oo ku saabsan dadka kale ee aan wax badan aqoon u leh qalabka kombiyuutarka, iyo laga yaabo in ay u isticmaaleeysay in ay ku dhammayn lahaa hawlaha maalinlaha ah. Waxay xajiyaan on yaabeen, waxa ay dhab ahaan waxay dhacdaa marka kombiyuutarka si dhab ah u soo jeestay oo ku saabsan. Halkan yimaado doorka iyo muhiimadda ay leedahay ee BIOS ah. Waa jab ah ku yaal systemboard ama motherboard of computer ah. Waxay hayaan dhammaan macluumaadka ku saabsan hardware ee kombiyuutarka. Ka soo qaad in aad ku daray baabuur cusub oo ay adag tahay in aad computer si kor loogu qaado meel ka, iyo drive in ay adag tahay aan la is ogaado in BIOS. Awoodaan in ay isticmaalaan drive in marka aad gasho si Windows Ma noqon doonta? Jawaabtu waa Maya, BIOS leeyahay in lagu ogaado drive adag ugu horeeyay, tan iyo markii ay ka haya dhamaan macluumaadka la xiriira goobaha hardware, ka dibna waxaa lagu baari doono System.BIOS qalliinka qaban dhammaan macluumaadka la xiriira goobaha hardware, taariikhda iyo waqtiga nidaamka . Waxa kale oo ay mas'uul ka yahay in la bilaabo POST taas oo is-jeeg sameeyo nidaamka laftiisa by.
Qaybta 1aad: Sida loo crack password BIOS
Waxaa jira qaar ka mid ah xaaladood dhibsado meesha aad rabto in aad beddesho goobaha qaar ka mid ah in BIOS iyo aad ka heli in waxa aan la qaadan sirta ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli screen sidaan oo kale ah.
Tani waxay sidoo kale waxaa laga yaabaa in xaalad ay aad iibsatay computer in qof kale oo iibiyaha ma wadaagno password BIOS ah. Sidoo kale suurto gal ah in qof kale isticmaalaa kumbiyuutar la mid ah oo ayaa password ka duwan in BIOS. Waxaan sii isku dayaya fiican sirta ah noo marti qaadnay. Laakiin, ka dib markii isku day qaarkood sidoo kale ma shaqeeyaan, markaas waa maxay? Haddii aan geli kari maayo BIOS in ka dhigan tahay in aan kula guuleestay 'ay awoodaan in ay wax isbeddel ah ee goobaha.
Haddii ay sidaa tahay waxaan ku khasbannahay in jebin password BIOS .Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu furfuro baaswoodhka. Qaar ka mid ah tallaabooyinka la siiyaa hoos ku qoran:
Ikhtiyaarka hore waxay noqon doontaa in la beddelo Password kicinta Settings on BIOS ah. Waxaa jira kicinta gaar ah oo ku saabsan motherboard ah oo loogu talagalay this. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagu talinayaa in buuga akhrisato wax soo saarka ugu horeysay ka hor inta uusan isku dayaya tallaabadan, sababtoo ah booska uu ka jumbarkaas kala duwan oo ka mid ah motherboard in kale.
Si aad u qabtaan tanina waxa ay leedahay in jeerna kombuyuutarka, hubi in cable korontadu derbiga ka soo baxa outlet.Unsrew lashu ku yaal Side Panel ee processor.
Marka, aad samayn in, la garto meesha uu kicinta BIOS on motherboard ah adigoo hubinaya in waraaqo wax soo saarka iyo la mid ah dib.
Kicinta ayaa lagu tilmaamay sidii CLEARCMOS ama JCMOS1.However ugu wanaagsan ee uu noqon doonaa in ay had iyo jeer tixraac waraaqo sheyga.
Marka taasi la sameeyo, la bilaabi computer iyo hubi in furaha qadan ama aan. Hadda mar password la waayay, mar kale jeerna kombuyuutarka, iyo dib jumbarkaas in ay markii hore.
Haddii habka ugu horeeyay ee aanu shuqullo, idin Imtixaamo kiinna soo galo daaqadda. Haddii desktop ay leedahay in la dhammaystiro adigoo kicinta CMOSka.
Dadka isticmaala laptop:
Dadka isticmaala laptop qorshaha heshiiska uu noqon doono gebi ahaanba ka duwan, maadaama ay u leeyihiin in ay isticmaalaan doorasho daaqadda galo password. Ku qor password qalad saddex kol ayaad shaashadda, oo wuxuu muujin doonaa qalad ah sida tan.
Qor code ah kaas oo la soo bandhigay. Markaas ka heli a qalab cracker password BIOS sida this site: http://bios-pw.org/ gala code soo bandhigay, ka dibna furaha lagu ahbaa doonaa in dhowr daqiiqo.
Qeybta 2: Sida loo dhaafayo password BIOS
Xaalada kale oo la mid ah tii xaaladood aan uga wada hadalnay kor ku xusan waxaa lagu xallin karin Goldogob password BIOS ah. Hababka oo halkaan loo isticmaali karaa la mid ah hababka loo isticmaalay xaaladood hore waa. Waxaa intaa dheer in, waxaan isticmaali kartaa laba hab oo sidoo:
Habka: Xammuul dhuleed keyboard ah
Habkani waa gaarka ah qaar ka mid ah wuxuu u sameeyey looxyada nidaamka jir ah, oo waa wax suurtagal ah in laga yaabo in nidaamka cusub ma awoodi doono inuu fuliyaan. Taas waxa loo sameeyaa booting nidaamka aan mouse ama keyboard, ama in naqshadaba qaarkood BIOS, u shaqayn doonto, oo ku garaacaya muftaaxa ESC ee isku xigta oo degdeg.
Qeybta 3: Sida loo joojiyo oo password BIOS
Haddii aad isku dayday in crack password BIOS iyo waxa aan shaqayn, waxaad dib karo password BIOS laga yaabee.
Habka 1: CMOSka batari saar
Talaabada 1: Hel batari CMOSka.
CMOSka batari noqon doonaa qaab wareega simay. CMOSka waa qayb muhiim ah oo BIOS guddiga System, iyo dhammaan motherboards waxay yeelan doonaan batari CMOSka ah. Waa mid aad u fudud in la ogaado on motherboard ah, tan waxa ay noqon doontaa wareega, simay iyo qadaadiic qaabeeya. Waxaa uu kaydiyaa BIOS oo ka mid ah goobaha aasaasiga ah hardware, taariikhda, waqtiga, iyo macluumaadka kale ee nidaamka. Si aad u soo saarto batari CMOSka, marka hore nidaamka ay leedahay in la demiyo, iyo sidoo kale in la hubiyo in cable xooggoodii ineysan.
Talaabada 2: saar iyo dib batari
Marka nidaamka buuxda loo demiyo saarto Battery CMOSka. Sug ilaa 15-20 daqiiqadood. Celi batari CMOSka iyo shid nidaamka.
Talaabada 3: Dib u celi password
Ka dib markii ay talaabada 2 lagu sameeyo oo waxaad dhaaftaan karo password BIOS iyo login kartaa si aad u computer si guul leh. Ogsoonow in aad ku dari kartaa lambarka sirta ah oo cusub oo ay mar kale ka BIOS. Haddii aad mar kale illoobin sirta ah ka dibna sii tallaabo 1 iyo 2 si ay dib sirta ah.
Habka 2: Orod amarka ka dhakhso MS-Dos
Habkani waxaa ka shaqeeya oo keliya haddii aad heli kartaa Operating System ku rakiban. Markii aan login naga desktop waxaan u leeyihiin in ay maamulaan barnaamijka MS-Dos, oo iyadoo amarrada soo socda ee isku si maadaama ay halkan lagu muujiyay:
Amarkani waxa resets BIOS password oo ka mid ah BIOS sida ceelka. Habkan waa mid ku fula isticmaalaya Debug tool ka MS-Dos.
Habka 3: Isticmaal Saddexaad ee Xisbiga Software
Maanta waxaa jira in badan oo software qayb saddexaad la heli karo, taas oo dib karaa BIOS password laakiin helitaanka nidaamka qalliinka waxaa lagama maarmaan ah. Qaar ka mid ah sirta loo jecel yahay BIOS arrinkaas software waxaa loo isticmaalaa sida CmosPwd iyo Kioskea
Habka 4: Isticmaal Backdoor BIOS password
Backdoor BIOS password waa set oo ah sirta ah, kuwaas oo sirta sayidkiisa ay bixiyaan BIOS Iibiyaha. Sirta Kuwani waa generic, oo ay si gaar ah ay u soo saarayaasha yihiin. In kale erayadan oo dhan farsameeya ilaaliyaan set oo ah sirta sayidkiisa oo loo eegin wax kasta password user ayaa loo isticmaali karaa. Sirta Hadalladaasu ma aha kuwa aad u adag tahay in la helo oo si fudud loo heli karaa website ka soo saaraha ee.
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Motorola Phones
> Resource > macruufka > Saddex Siyaabaha crack BIOS password